Dhegayso C.wali Gaas “Somaliland waa la iska celinayaa Wuxuushta Cadaystay Dhiiga shacabka Soomaaliyeed ” | Kalshaale
Dhegayso C.wali Gaas “Somaliland waa la iska celinayaa Wuxuushta Cadaystay Dhiiga shacabka Soomaaliyeed ”
May 17, 2018 - 11 Aragtiyood
Laascaanod (Kalshaale) Madaxweynaha Maamulka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo ku sugan magaaladda Baydhabo ayaa si kulul uga hadlay dagaalki ka dhacay degaanka Tukaraq ee gobalka sool ,kaas oo u dhaxeyaay Ciidamadda Puntland iyo kuwa somaliland isago sheegay in ciidamada somaliland cashar loo dhigay isla markaana la iska difaacay.
C.wali Gaas ayaa sheegay in somaliland gardaro ay ku socoto ,isla markaana somaalinimo diiden balse la iska dhicin doono Ciidamadda Puntland aysan u dulqadan doniin garadarada qaawan ee somaliland waddo.
HALKAN KA DHEGAYSO WARAYSIGA CABDIWALI GAAS
“Mala good baa galay dadkaas dugaaga ah ee wuxuushta ah oo soo duuley oo banaystay dhiiga Islaamka waana ku dhimanayaan, difaaca dalka iyo xorayntuna waa soconaysaa” Ayuu yidhi Gaas.
Ilaahay ha sahlo oo ha innaga qaboojiyo kani wuu iska hadlayaa qabiilku ayuu ku hadlayaa kuwa kalena xadkii ingiriis ayeey ku socdaan isaguna daarood iyo harti ayuu hoonku kaga dhegay
Oo morgana waxba ma ka tari waayey sidii ninkii lahaa alamtarana soo dhaaf
Jamac ninka xuduud aan jirin radinaya iyo ninka darood radinaya kekhaldan Somalia qabiil bay u burburtay lona kalafadhiyaa.run buushegay lascanod waa puntland dhamaan dhulka dhulbahante waa puntland dhulna makala leha dhulbahante iyo majeerteen iyo warsangeli iyo darood dhamaantii
Safarbaan ku jiraa, waxbadan ma qori karo.
Walaahi waa ka naxay dagaalkaas.
Aniga weligey waan ogaa in khayr kasoo socon xuduudkaas.
Waxaan reer tolkay dagaal ay go,aansadeen shar iyo qayrba diyaar u yihiin.
Waad arkin ayagoo laascaanood jooga.
Waxaa jebin kara Dhulbahante oo kasoo horjeesta.
Allow kala qabooji.👎
Page waxaan ku arkaayey Dabdhid iyo Cadaado oo dabaal degeya..dabaalo
Waa laba fulay oo reer Galmudug ah oo Majeerteen ka baqa, waxooda waa allow Majeerteen cid xoogooda jabisa usoo dir.
Ramadam karim, maryooley iyo muslim.
Inta dhimatay alle u naxariisto.
War dagaalka joojiya, wiilbaa ku dhinta, wiil kuma dhasho.
Maanta run bay joogtaa oo bootadii Faysal Garoowe soo gubin maaha.
Dagaalkaan wuxuu noqon karaa mid dhiig badan ku daato. I am worry
Hadalkaaga waa run mid leh Engris baa dhul ii cabiray iyo mid qabiil xuduud u yahay oo labaduba isla garleeyihiin ayaa umadaan halaag usoo wada hadaan aqliga shaqayn.
Mala garan waayey nin walba tuuladiisa waa yaqaan, dadka dega cod ka qaada oo ha raaceen dhica rabaan, hadday ayaga state noqon karin.
Ha la isxasuuqo ma aqlibaa oo wiilasha
Ha la isku laayo. Mise dadbaa bootadii run mooday Garoowe la gubin iyo Burco la gubin, taas dhiig badan baa ka sokeeya diyaar ma looyahay mise lagama fekerin.
Dagaal & dhiig data maya Dagaalki afka haa. Dagaal ooge Muuse Biixi muxuu yiri WIILAL laga keenay Badhaadhe, Buur hakabo, Baraxley ayyaa laygu soo fasaxay? WELINA waxaan joogaa TUKARAQ?. MAASHAA ALLAAH war adeerow kaalay OGAADANYA & NFD noo xure. WBT
Waxaan codsanaynaa in walaalaheen pudlaand loo soo celiyo taangigiii lagu difaaci jiray gaalkacy ama mudug
C/uusbuur yaa ka cadhaysiiya, waaxay Caydi?😀
gaas iyo bixi may kaligood is dagaalaan oo meel banan ah isku balansadaan intay shacabka isku dilayaan